सीपी गजुरेलको वक्तव्यप्रति मसालको ध्यानाकर्षण - NepaliEkta
1371 जनाले पढ्नु भयो ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले सीपी गजुरेलद्वारा प्रेशित २१ दलको वक्तव्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वक्तव्यको ड्राफ्ट सम्बन्धित दलहरुलाई नपठाइएको र कतिपय सहमति बाहिरका कुरा समेत समावेश भएको मसालले जनाएको छ ।
सोमबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी मसाल प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले विगतमा पनि संयुक्त आन्दोलनका क्रममा कतिपय सहमति नभएका विषयहरु संयुक्त वक्तव्यमा आउने गर्दा समस्या भएको स्पष्ट पार्दै संयुक्त आन्दोलनमा सहमति नभएका विषयलाई सार्वजनिक गर्नु अघि छलफल गरेर एकरुपता दिन सचेत गराउनुभएको छ ।
नेकपा (मसाल) समेत सहभागी २१ दलीय संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट नेता गजुरेलले असोज २५ गते जारी गर्नुभएको वक्तव्यको बुँदा नं ३ मा भनिएको छ, ‘…बैठकका सञ्चालक सीपी गजुरेलले यतिखेर नेपालमा विद्यमान सरकार र राज्यव्यवस्थाको समेत विकल्पको खोजी भइरहेको अवस्थामा हामीले आत्मगत शक्तिको तयारी गर्दै एउटा भरपर्दो विकल्प प्रस्तुत गर्ने काममा सक्रियतापूर्वक लाग्न सबैसँग अनुरोध र अपिल गर्दै, बैठकमा उपस्थित भएर यसको सफलतामा योगदान पु-याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै बैठकको समापन गर्नुभयो ।’
नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले युगदर्शनलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ‘विद्यमान सरकार र राज्यव्यवस्थाको समेत विकल्पको खोजी भइरहेको’ भन्ने अभिव्यक्ति संयुक्त आन्दोलनको मर्मविपरित भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संयुक्त आन्दोलनमा बाहिर लैजाने गरी सहमति भएका विषयबाहेक कुनै दलले आफ्नो धारणालाई संयुक्त वक्तव्यमा समावेश गर्नु गल्ती भएको बताउनुभयो ।
प्रवक्ता पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छः
१) २० राजनीतिक संगठनका तर्फबाट का. सीपी गजुरेलले जारी गर्नु भएको वक्तव्यप्रति नेकपा (मसाल) ध्यान आकर्षित भएको छ ।
२) हामीले पालन गर्दै आएको संयुक्त आन्दोलनको आचार संहितामा दुईवटा नियमहरुलाई पालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने गरिएको छ : प्रथम, कुनै वक्तव्य जारी गर्दा सहमति भएका विषयहरुलाई मात्र समावेश गर्ने । त्यो कुरालाई निश्चित गर्न कुनै वक्तव्य जारी गर्नु भन्दा पहिले वक्तव्यको मस्यौदा सम्बन्धित पक्षहरुलाई पठाउने गरिन्छ । द्धितीय, संयुक्त कार्यक्रमहरु स्वीकृत नारा वा विचारहरुलाई मात्र लैजाने । तर अहिले का. गजुरेलले पहिलो नियमलाई पालन गरिएको देखिएन ।
३) उहाँले वक्तव्यमा सहमति भएका विषय बाहेक परस्परमा मतभेद भएका विषयहरुलाई पनि सामेल गर्नुभएको छ । खास गरेर वक्तव्य जारी गर्नुभन्दा पहिले मस्यौदा सम्बन्धित पक्षहरुलाई पठाउने काम पनि गरिएको छैन ।
४) कुनै पनि पार्टी वा संगठनलाई आफ्ना तर्फबाट आफ्ना बेग्लै विचारहरु बाहिर लैजाने स्वतन्त्रता छ । तर संयुक्त वक्तव्यमा सहमति नभएका आफ्ना बेग्लै विचारहरुलाई पनि समावेश गर्नु संयूक्त आन्दोलनको आचरसंहिताका विरुद्धको कुरा हो ।
त्यसबाट संयुक्त आन्दोलनमा अनावश्यक प्रकारका विवादहरु पैदा हुने र कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । गतकाल कैयौँपल्ट त्यस्तो हुने गरेको छ । त्यसकारण त्यस प्रकारको गलत कार्यशैलीलाई नदोहोर्याउन हामीले सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गर्दछौँ ।
← कथा : फलामको साङ्गलोमा काले
अब उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताल कोरोना विशेष अस्पताल →